Iingxaki kunye nezisombululo - uLongou kwiShishini leHlabathi (iShanghai) Co., Ltd.
Iingxaki eziqhelekileyo ekwakheni i-wall putty kunye nezisombululo
Amaqamza aveliswa ngexesha lenkqubo yokwakha nasemva kwethuba lexesha, umphezulu wegwebu le-putty.
Isiseko sirhabaxa kwaye isantya sokukhuhla siyakhawuleza kakhulu;
Uluhlu lwe-putty lukhulu kakhulu kulwakhiwo lokuqala, ngaphezulu kwe-2.0mm;
Umxholo wamanzi wesiseko siphezulu kakhulu, kwaye uxinano lukhulu kakhulu okanye lincinci kakhulu. Ngenxa yokuba iqulethe i-voids eninzi kwaye i-putty inomxholo ophezulu womswakama, ayiphefumli, kwaye umoya uvalelwe kwindawo engenamsebenzi, ekungekho lula ukuyiphelisa;
Emva kwethuba lokwakha, ukugqabhuka kunye namadyungudyungu kuvela ngaphezulu, ikakhulu okubangelwa kukungafani okungalinganiyo. I-slurry iqulethe i-powdery particles ezikude kakhulu ukuba zinganyibilika. Emva kolwakhiwo, isixa esikhulu samanzi siyatsalwa kwaye sidumbe ukwenza ukugqabhuka.
① Xa kuvela umphezulu omninzi we-putty bubble, sebenzisa ispatula ukutyumza ngokuthe ngqo amaqamza amancinci, kwaye usebenzise i-putty efanelekileyo ukukrwela umaleko womphezulu one foamed;
② I-Putty ixutywe ngokulinganayo ngokulinganayo, emva koko mayime malunga nemizuzu eli-10, emva koko usebenzise umxube wombane ukuphinda uyixube uphinde uyibeke eludongeni;
ThereUkuba kukho ukudumba kumgangatho wesibini okanye wokugqibela kulwakhiwo, kufuneka kusetyenziswe i-spatula ukususa amagwebu ngaphambi kokuba i-watermark isuswe ukuze kuqinisekiswe ukuba akukho blisty ivela kumhlaba we-putty;
Iindonga ezirhabaxa ngokukodwa, khetha ngokubanzi i-putty eshinyeneyo njengezinto ezisisiseko;
Kwimeko apho udonga lome kakhulu okanye umoya womelele kwaye ukukhanya kunamandla, kuqala ukumanzisa udonga ngamanzi acocekileyo kangangoko kunokwenzeka, kwaye emva kokuba udonga lungenamanzi, gudla umaleko we-putty.
Emva kokuba ulwakhiwo lugqityiwe kwaye lomile, umgubo uya kuwa xa uchukunyiswa ngesandla.
Ixesha lokucoca i-putty powder yangaphakathi alilawulwa kakuhle, kwaye umphezulu womile kwaye emva koko upolishiwe uya kuba ngumgubo;
Udonga lwangaphandle lwe-putty powder, ukutyabeka kuncinci, kubushushu obuphezulu ehlotyeni, amanzi aphuma ngokukhawuleza, kwaye umphezulu womhlaba awunawo amanzi awoneleyo okunyanga, ngoko ke kulula ukuthatha umgubo;
ProductImveliso ibugqithisile ubomi beshelfini, kwaye ukomelela kwamandla kuyancipha;
ProductImveliso igcinwe ngokungafanelekanga, kwaye amandla okuncamathela ehla kakhulu emva kokufunxa ukufuma;
Iqondo eliphezulu lokufunxwa kwamanzi kwinqanaba lesiseko lenza ukuba i-putty yome ngokukhawuleza, kwaye akukho kufuma kwaneleyo okuphilisa.
Amandla obophelelwano phakathi kwe-putty kunye nesiseko sesiseko asisihle, kwaye iyawa ngokuthe ngqo ukusuka kwinqanaba lesiseko.
Udonga oludala lugudile (njenge-putty enomsindo, i-polyurethane kunye nenye ipeyinti esekwe ngeoyile), kunye ne-putty powder enokubambelela okungalunganga kumphezulu;
Udonga olutsha luphoswa ngetemplate, umphezulu ugudile kwaye uqukethe isixa esikhulu searhente yokukhutshwa (i-oyile yenkunkuma okanye i-silicone);
③ Kwizinto ezenziwe ngomthi, iziqwengana zesinyithi kunye nezinye izinto ezingezizo ezomdongwe (njengeplywood, i-plywood ezintlanu, ibhodi yamasuntswana, ukhuni oluqinileyo, njl.), I-putty ikhutshiwe ngokuthe ngqo, ngenxa yokwanda komphezulu womhlaba kunye nemilinganiselo yokunciphisa, kunye neemveliso ezinjalo ukuba nokufunxwa kwamanzi okuqinileyo kunye nokuqina kwangaphakathi kwe-putty yodonga akunakukhubazeka kunye nayo, ngokubanzi kuya kuwa emva kweenyanga ezintathu;
Put I-putty igqitha ubomi beshelfini kwaye amandla okudibanisa ayancipha.
① Susa umaleko wokuxobuka kwaye ujongane nawo ngokwale miqathango ilandelayo;
② Polisha udonga oludala ukunyusa uburhabaxa bomhlaba, emva koko usebenzise iarhente yojongano (i-10% yeglue yokukhuselwa kwendalo okanye iarhente ekhethekileyo yojongano);
Sebenzisa iarhente yokucoca yokuthambisa ukususa iarhente yokukhupha okanye ezinye izinto zegrisi ngaphezulu, emva koko ufake i-putty;
④ Sebenzisa amacandelo amabini okanye iiplywood ezizodwa zokwakha;
Nceda usebenzise i-putty entsha ekhethekileyo yodonga olungaphandle lwamatye emarmore, i-mosaic, i-ceramic tile kunye nezinye iindonga zangaphandle. Sebenzisa ngaphakathi kwethala lokugcina ubomi.
Phakathi kwamacandelo amabini e-putty okanye phakathi kwe-putty kunye ne-substrate iyaxobana.
① Susa umaleko wokuchuba kwaye uphinde ukhethe i-putty ekhethekileyo ukuze uyikrweqe;
Construction Kwindawo ezinokwakheka ngokuqatha, kungcono ukusebenzisa i-10% yokutywina i-primer yokuthambisa ukutywina, nasemva kokumisa, yenza umaleko ohambelana noko okanye olunye ulwakhiwo;
③ I-Putty, ngakumbi i-putty yangaphakathi yodonga, yenza mfutshane isikhewu phakathi kolwakhiwo olubini;
Nika ingqalelo kukhuseleko ngexesha lenkqubo yokwakha. Ngexesha lokwakha i-putty okanye ngaphakathi kweeyure eziyi-8 emva kokwakhiwa, i-putty ayifanele ifakwe ngaphakathi emanzini.
Emva kokubeka i-putty kangangexesha elithile, umphezulu waqhekeka.
I-putty eqhekekileyo kufuneka isuswe. Ukuba ukuqhekeka akukukhulu kakhulu, i-putty eguqukayo ingasetyenziselwa ulwakhiwo lokuqala, emva koko ulwakhiwo luya kwenziwa ngokwendlela esemgangathweni yokwakha;
Ulwakhiwo ngalunye akufuneki lube lukhulu kakhulu. Ixesha eliphakathi kwezi zakhiwo zombini kufuneka libe ngaphezulu kweeyure ezi-4. Emva kokuba i-putty yangaphambili yomile ngokupheleleyo, ukukrola ngasemva kuyenziwa.
Ukwakha ngaphambi kokuba isiseko somile ngokupheleleyo, kwaye ulwakhiwo lufuna ukuba ukufuma kwesiseko kungaphantsi kwe-10%;
Bottom I-putty engezantsi ayomiswanga ngokupheleleyo, dlula umphezulu kuphela, umaleko womphezulu womile kuqala, kwaye umaleko wangaphakathi usekho kwinkqubo yokomisa, kukhokelela kumanqanaba ahlukeneyo okuncipha phakathi kwamanqanaba kwaye kube lula ukuqhekeka;
③ Xa isiseko soluhlu sigqityiwe, ukuba izinto zokulungisa kunye nokuthambisa azomile ngokupheleleyo, udonga lwangaphakathi lodonga olunobulukhuni obomeleleyo lisetyenziswa kulo, ekulula ukubangela ukuqhekeka;
Ulwakhiwo lukhulu kakhulu, ukomisa kwangaphakathi kuyacotha, isantya sokomisa umphezulu ngokukhawuleza, kwaye kulula ukubangela ukuqhekeka.
Emva kokuba ulwakhiwo lwe-putty lugqityiwe, inxenye okanye yonke iya kubonakala ityheli kungekudala.
Oku kwenzeka ikakhulu kwiindonga ezindala zangaphakathi. I-putty yakudala yodonga isebenzisa iglu eninzi ye-PVA. Iglue indala kwaye ibolile ukuvelisa i-asidi engafakwanga asidi. Iasidi engafakwanga i-asidi iphendula nge-ions ye-calcium kwi-putty ukuvelisa ityuwa ye-calcium etyheli ehambelanayo.
CoatingRoll ukutyabeka kabini ngeglue enokusingqongileyo, kwaye emva koko usebenzise ubushushu bamanzi asekwe kwindonga yangaphakathi enamanzi emva kokuba yomile ngokupheleleyo;
Qengqeleka kwiingubo ezimbini zetywina elimhlophe, uze ukrobe i-putty emva kokuba yomile kwaphela;
Sebenzisa incamathiselo yokuncamathelisa kulwakhiwo, okanye usebenzise ibhodi yokubeka ekwakhiweni.
Amanyathelo obuchwephesha ukoyisa iintanda kwiprojekthi yokwambathisa ubushushu eludongeni
①Umlo wokuqhekeka komaleko wokhuselo lokuqhekeka kukuphikisana okuphambili, kwaye kufuneka kusetyenziswe udaka olukhethekileyo lokulwa kunye nomnatha wokomeleza ofanelekileyo,
Ukongeza isixa esifanelekileyo sepolymer kunye nefayibha kudaka kuyasebenza ekulawuleni iintanda.
Ngodaka lokutyabeka kunye nokwenza ngcono inethi yokuqhekeza inkunkuma ekhuselweyo eyenziwe yinkqubo yonke idlala isiphumo sokumelana nokubambana. I-deformation ifanele ibe nkulu kuneyona meko imbi kakhulu, i-deformation ye-tensile mortar (i-dein shrinkage deformation, i-deformation, i-deformation temperature, i-humidity kunye ne-chemical deformation) kunye ne-primary deformation kunye ne-layer layer, ukuze kuqinisekiswe imfuneko yokuqhekeka ukumelana crack ukumelana. Ikhompiyutha kuthungelwano lodaka oluqinisiweyo (njengokusebenzisa ilaphu le-fiberglass mesh), kwelinye icala linokunyusa amandla okomelela kukhuseleko lokwahlulahlula, kwelinye icala, lunokusasaza uxinzelelo, lunokuba nemvelaphi ebanzi (Ukuqhekeka) saa kwiindawo ezininzi ezincinci (iintanda) ukwenza umphumo wokuchasana. Kubalulekile kwinto yokuqala yokumelana ne-alkali yokugubungela kunye nomphezulu osongelwe kwilaphu yefayibha yeglasi, iindidi zeglasi yefayibha kwaye inokubaluleka kokuthintela ukuxhathisa kwealkali yexesha elide.
Umaleko wokuhombisa izinto kungekuphela nje ukuba uqhekeke, kodwa uphefumle (ukufuma) kunye nolungelelwaniso lokwahlula ubushushu, kungcono ukhethe ilastikhi yangaphandle yodonga.
Olunye uluhlu lojongano, umaleko wokugquma, ukuqinisa kunye nezinto zokuqinisa kufuneka zinikezwe ngabavelisi abaziingcali ukuphucula ukulandeleka kweengxaki zomgangatho.
Kutheni iithayile ezigqityiweyo ziqhekeka?
Ngokubanzi, zintathu izizathu zokuqhekeka kweethayile: inye yimigangatho yeethayile ngokwazo; enye ingxaki yokwakhiwa kwepavile yethayile, kwaye eyesithathu ngumaleko wesiseko kunye nemikhosi yangaphandle. Apha ngezantsi siza kuchaza izizathu ezithile ngokweenkcukacha:
Ezinye iithayile zinamazinga aphezulu okufunxa amanzi kunye nokunganyanzeleki ukuxinzelela, nto leyo ebangela ukuba iithayile ziqhekeke; Iithayile azitshiswa ngexesha lenkqubo yokudubula, kwaye ziyaqhekeka ngexesha lokuhamba, ukugcinwa kunye nokusetyenziswa. Umgangatho wethayile ngokwawo uyingxaki, kwaye ukubonakala kokuqhekeka kufana nqwa nemesile, njengobungakanani beenwele ezintle, umlinganiselo weentanda uphakamile, kwaye kunokubakho iintanda ezininzi kwithayile. Le meko ngokubanzi ivela kwiimveliso ezisezantsi.
Isamente esemgangathweni ophezulu isetyenziswa: Isamente yesi-425 yesiqhelo yasePortland isetyenziselwa ukwakha iithayile. Umlinganiselo wokuxutywa kwesanti yesamente ngu-1: 3. Ukuba ibakala lesamente liphezulu kakhulu, isamente iya kuthatha amanzi amaninzi xa udaka lwesamente luqinisiwe. Ngeli xesha, ukufuma kwethayile kufakwe ngokugqithileyo, kulula ukuba kuqhekeke. Ngokubanzi, ibonakaliswa njengokuqhekeka kweethayile ezininzi, kwaye ulwalathiso lobume bokuqhekeka aluqhelekanga.
Iithayile zeCeramic zibekwe kwimigqomo engenamakhonkco ebangela ukuba iithayile ziqhekeze: imigqomo engenamakhonkco kunye nemigqomo engenantsimbi, udaka lwesamente kunye neethayile zekheram zinee-coefficients zokukhulisa ezahlukeneyo, ezibangela ukuba iithayile zikhubazeke kwaye ziqhekeke. Ngokubanzi, ukuhanjiswa kweethayile eziqhekekileyo akuqhelekanga, kwaye iintanda nazo ziqhelekile. Ukuqhekeka kulayini kwaye banobude obahlukeneyo. Ingqungquthela iphantsi, idibeneyo kwaye idaka.
OAkukho seams kushiyeke ipavumente, ulwandiso kunye nokuncipha kweethayile zeceramic kwaye umaleko wesiseko awuhambelani, kwaye ukwanda kwe-thermal kunye nokucutha kubangela ukuba iithayile zeceramic ziqhekeke. Ngokubanzi, kukho iintanda kwiikona zethayile, iintanda ezincinci ngaphezulu, kunye nokuthungwa okufutshane.
Iles Iithayile zodongwe ziyaphazamiseka emva kokusika: iintanda ezimnyama zenziwa ngexesha lenkqubo yokusika. Emva kwexesha elithile, iithayile zeceramic ziyachaphazeleka ngenxa yokuncipha kwesamente kunye namandla angaphandle.
Umaleko wesiseko kunye nemikhosi yangaphandle
DeWall deformation kunye nokuqhekeka Ngenxa yeengxaki zayo zejoloji, inqanaba elithile lokuncipha liyakwenzeka, neliza kubangela ukuba udonga lukhubazeke kwaye luqhekeke kwaye lubangele ukuqhekeka kwethayile. Ngokubanzi kuboniswa njengokuqhubeka rhoqo kunye nokuqhekeka rhoqo.
Ukuqhekeka iithayile ezibangelwa kukungcangcazela kodonga okubangelwe kukutshayisa udonga
Kusondele kakhulu kwimithombo yobushushu, kwaye iqondo lobushushu liyatshintsha ngenxa yokupholisa nobushushu obungaphezulu, kwaye ukwanda kwe-thermal kunye nokucutha kubangela ukuba iithayile ziqhekeke. Le nto yenzeka ngokubanzi ekhitshini, kumagumbi okubilisa amanzi, njl.